NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် Zenith R & D သမ္မတ Jong KIM ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, LG Electronics အမည်ရှိ
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Zenith R & D သမ္မတ Jong KIM ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, LG Electronics အမည်ရှိ
Zenith R & D သမ္မတ Jong KIM ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, LG Electronics အမည်ရှိ
မြှင့်တင်ရေးအမေရိကန် R & D Lab က၏အရေးကြီးအခန်းကဏ္ဍဂရုစိုကျတယျဆိုတာကိုကင်မ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အလှူငှမြေားအသိအမှတ်ပြု
Lincolnshire, မကျန်းမမာ, ဇူလိုင်လ 22, 2015 ။ - ဒေါက်တာ Jong ကင်မ်သည် Zenith သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး Lab ကသမ္မတ, Zenith ရဲ့မိဘကုမ္ပဏီ LG Electronics ၏အကြီးတန်းဒုတိယသမ္မတအမည်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကင်မ်ရဲ့အသစ်အနေအထား, အနောက်တိုင်းခြမ်းအတွက် LG ရဲ့အများဆုံးအကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိတဦးအဖြစ်, မျိုးဆက်သစ်အသံလွှင့်စံချိန်စံညွှန်းများအဘို့နည်းပညာများ groundbreaking ပေါ်တွင်အလုပ်ပါဝင်သောအမေရိကန် R & D ဓာတ်ခွဲခန်း၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍထင်ဟပ်; ဧညျ့, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်စနစ်များသည် ဖြစ်. , နှင့်အခြား high-profile ကို LG ကနည်းပညာအစီအစဉ်များအကြားမော်တော်ကားအီလက်ထရွန်းနစ်များအတွက်။
ကင်မ် 2005-2000 ထံမှဒုတိယသမ္မတ, Zenith R & D အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက် 04 ကတည်းက Zenith ကိုသမ္မတဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆင့်မြင့်ရုပ်မြင်သံကြားစနစ်များကော်မတီ (ATSC) ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်မြင်သံကြားစံချိန်စံညွှန်းမှတစ်ဦးက key ကိုပံ့ပိုးသူ 1990 အတွက် Zenith အီလက်ထရောနစ် LLC ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ (LG က 1999 အတွက် Zenith ဝယ်ယူ။ ) Kim က 1983 အတွက် LG Electronics ၏တစ်ဦးသုတေသနအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ခဲ့သည်။
သူကသူ့ Ph.D ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည် Alabama အဘိဓါန်တက္ကသိုလ်မှလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကအီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ၌မိမိက MS နှင့် BS ဒီဂရီ။ သူကအသံလွှင့်အပေါ်စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်အမေရိက၏ Motion Pictures ရုပ်ရှင်၏အသငျး၏ဂျာနယ်နှင့်ကို IEEE အရောင်းအဝယ်ပေါ်တွင်ကို IEEE အရောင်းအဝယ်အပါအဝင်နည်းပညာဆိုင်ရာဂျာနယ်များတွင်ဦးဆောင်ထုတ်ဝေမြောက်မြားစွာစာတမ်းများ၏ Co-စာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်။
"ဂျုံကင်မ်နှင့် Zenith R & D Lab မှ United States မှာ LG ရဲ့စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်နည်းပညာခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း key ကိုမျှဝေသူများမှာ" ဟုဒေါက်တာ Skott Ahn, နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်နည်းပညာအရာရှိချုပ်, LG Electronics ၏ဟုပြောသည်။ "အခုအချိန်မှာအထူးအဓိပ်ပာ၏ထွန်းသစ်စ ATSC 3.0 စံများအတွက်နည်းပညာများထုတ်လွှင့်မျိုးဆက်သစ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်, ကိုရီးယားအတွက် LG က R & D ဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့်အတူအနီးကပ်ပူးပေါင်း, အမေရိကန်အဖွဲ့ကဒေါက်တာကင်မ်ရဲ့လမျးညှနျဖြစ်၏။ "
LG Electronics ၏ Inc ကအကြောင်း
LG Electronics ၏ Inc ကို (KSE: 066570.KS) သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 83,000 နေရာများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင် 119 လူတွေကိုအလုပ်သမား, စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်, မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်နှင့်နည်းပညာတီထွင်ဖြစ်ပါတယ်။ နှင့် Flat-panel ကတီဗီ၏ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည် - ပင်မစာမျက်နှာ Entertainment ကမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး, ပင်မစာမျက်နှာပစ္စည်းကိရိယာ & Air ကိုဖြေရှင်းနည်းနှင့်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ - အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2014 ဘီလျံ (ဝမ် 55.91 ထရီလီယံ) ၏ 59.04 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရောင်းနှင့်အတူ, LG ကလေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူနစ်ပါဝင်သည် မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေ, လေအေးပေးစက်, အဝတ်လျှော်စက်တွေနဲ့ရေခဲသေတ္တာ။
LG Electronics ၏အမေရိကန်နိုင်ငံအကြောင်း
Englewood ကမ်းပါးတွင်အခြေစိုက် LG Electronics ၏အမေရိကန်နိုင်ငံ Inc ကို, NJ, LG Electronics ၏, Inc, စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်, အိမ်သုံးပစ္စည်းနှင့်မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် $ 56 ဘီလီယံအထိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအင်အားနှင့်နည်းပညာခေါင်းဆောင်များ၏မြောက်အမေရိကလက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ်။ LG Electronics ၏, တစ်နှစ်တာ၏မာနထောင်လွှား 2015 ENERGY STAR အဖော်အပေါင်းတို့, LG ရဲ့ "ဘဝရဲ့အောက်မှာ, United States မှာအိမ်တွင်းဖျော်ဖြေရေးထုတ်ကုန်, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, အိမ်သုံးပစ္စည်း, စီးပွားဖြစ် display တွေ, လေအေးပေးစက်စနစ်များနှင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်စတိုင်နှင့်ဆန်းသစ်တဲ့အကွာအဝေးရောင်းချ ကောင်းသော "စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆောင်ပုဒ်။ www.lg.com.
Zenith အီလက်ထရောနစ် LLC အကြောင်း
Zenith အီလက်ထရောနစ် LLC ။ Lincolnshire, မကျန်းမမာအခြေစိုက်အမေရိကန်နည်းပညာနှင့်လိုင်စင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး, 1918 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ 1998 အတွက် LG Electronics ၏ကဝယ်ယူခဲ့သည့် Zenith, LG ရဲ့အမေရိကန် R & D လက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ်။ Zenith ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်မြင်သံကြားနည်းပညာများနှင့် FCC သည်ကမွေးစားကလက်ရှိအမေရိကန်ဒစ်ဂျစ်တယ် HDTV ဂီယာစနစ်၏တီထွင်သူတစ်ဦးသက်တမ်းကြာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ Emmy Award ဆု-အနိုင်ရ Zenith နည်းပညာများဒစ်ဂျစ်တယ် HDTV, Flat-screen display, စတီရီယိုရုပ်မြင်သံကြားနှင့်တီဗီဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုများပါဝင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.zenith.com.
LG Electronics ၏ယူအက်စ်အေ
Zenith အီလက်ထရောနစ် LLC
ArlandCom အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, adapter Standard ပြ NAB Show မှာ ATSC 3.0 သရုပ်ပြ - ဧပြီလ 14, 2016
ဗိုလ်မှူးအသံလွှင့်အဖွဲ့များနှင့် Tech မှ CompaniesBack အဆင့်မြင့်အရေးပေါ်သတိပေးချက်ဝန်ဆောင်မှု - ဧပြီလ 14, 2016
တောင်ကိုရီးယားတွင် 4K ထုတ်လွှင့်စမ်းဘို့ချထား DS ထုတ်လွှင့် encoding SYSTEM - ဧပြီလ 14, 2016
2015 ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း တီဗီနည်းပညာ UHD / 4K / HD ကို viarte Warsaw ကို	2015-07-23
ယခင်: အဆိုပါ SCTE ရဲ့ပထမဦးစွာဒုတိယသမ္မတ, သင်ယူ & ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအဖြစ် TD Madison & Associates မှနေရာများ Reni Gorman
နောက်တစ်ခု: Dalet စီးပွားရေးဖြေရှင်းချက် FOX အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိုင်းများအီတလီနှင့်ဗြိတိန်မီဒီယာစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေနိုင်ခြင်း